अमेरिकी राष्ट्रपतिमा हाइप्रोफाइल डेमोक्रेटिक उम्मेदवार कमला ह्यारिसले छाडिन् मैदान « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas KHASOKHAS E-MAGAZINE
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा हाइप्रोफाइल डेमोक्रेटिक उम्मेदवार कमला ह्यारिसले छाडिन् मैदान
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा हाइप्रोफाइल डेमोक्रेटिक उम्मेदवारका रुपमा चर्चित कमला ह्यारिसले मैदान छाडेकी छिन् । उनले मंगलबार राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी त्यागेको घोषणा गरेकी हुन् ।
उनले मंगलबार आफ्ना समर्थकहरुलाई इमेल पठाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक अभियानमा रकमको अभाव भएकाले उम्मेदवारी त्यागेको घोषणा गरेकी हुन् । उनको यो घोषणालाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको दौडमा आएको आकस्मिक मोडका रुपमा हेरिएको छ ।
उनले मार्टिन लुथर किंगको जन्मदिनको अवशरमा आफ्नो चुनावी अभियान सुरु गरेकी थिइन् । उनी डेमोक्रेटिक उम्मेदवारको डिसेम्बर डिबेटमा समेत योग्य भएकी थिइन् । डिसेम्बर डिबेटका लागि योग्य हुने उनी एकमात्र अश्वेत उम्मेदवार थिइन् ।
ह्यारिसले डेमाक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट क्यालिफोर्नियाबाट सिनेटमा प्रतिनिधित्व गर्छिन् ।
क्यालिफोर्नियाको एटर्नी जनरलका रुपमा कमलाले ६ बर्ष बिताएकी थिइन् । सन् २०१० मा क्यालिफोर्नियाको एटर्नी जनरलको दौड जित्नु अगाडि उनी सान फ्रान्सिस्कोको डिस्ट्रिक्ट एटर्नीमा दुईपटक निर्वाचित भएकी थिइन् ।
क्रिमिनल जस्टिस रिफर्म रेकर्डकी अभियन्ता कमलाले बैबाहिक समानताको लडाईमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन् । कमला अमेरिकी सिनेटरमा निर्वाचित दोश्रो अश्वेत महिला हुन् । सन् १९९२ मा चुनाव जितेकी सिनेटर क्यारल ब्राउन पहिलो अश्वेत महिला सिनेटर हुन् ।
कमला अमेरिकी सिनेटमा पुग्ने पहिलो भारतीय अमेरिकन हुन् । कमलाकी आमा भारतबाट अमेरिकामा बसाई सरेकी थिइन् । कमलाकी आमा श्यामला गोपालन चर्चित स्तन क्यान्सर विशेषज्ञ हुन् । त्यसपछि उनले अमेरिकी अश्वेत जमैकन अमेरिकन डोनाल्ड ह्यारिससँग विवाहगरेपछि कमला जन्मिएकी थिइन् । यसर्थ कमला अहिले अफ्रिकन अमेरिकन र इन्डियन अमेरिकनका रुपमा चर्चित छिन् ।
यस अगाडि अमेरिकी राष्ट्रतिका अर्का डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जो सेस्टाकले आइतबार आफ्नो चुनावी अभियान समाप्त भएको घोषणा गरेका थिए । गत जुनमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका उनी डेमोक्रेटिक उम्मेदवारको बहसमा पनि योग्य हुन सकेनन् ।
को को छन् मैदानमा ?
अमेरिकाका राष्ट्रपतिको चुनावका लागि अब एकबर्षपनि बाँकी छैन । वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोश्रो कार्यकालका लागि भिड्दैछन् । उनीसँग भिड्नका लागि १ दर्जनभन्द्या धेरै डेमोक्रेटिक उम्मेदवारहरु पाखुरा सुर्कदैछन् तर प्राइमरी जितेर वास्तविक भिडन्तका लागि मैदानमा उत्रने एकजना हुनेछन् ।
अहिलेसम्म मैदानमा देखिएकाहरुमा सबैभन्दा बढी उमेरका बर्नी स्याण्डर्स ७८ बर्षका छन् भने कम उमेरका पिट बुटाजज ३७ बर्षका छन् । ७६ बर्षका जो बाइडेन र ७० बर्षकी एलिजाबेथ वारेन पनि निकै चर्चामा रहेका उम्मेदवारहरु हुन् । माइलक ब्लुमबर्ग पछिल्लो चरणमा निकै चर्चामा छन् ।
माइकल बेनेट, कोरी बुकर, स्टीभ बुलोक, हुलियन क्यास्ट्रो, जोन डेलानी, तुलसी गब्बार्ड, एमी क्लोबुचार, वायन मेसाम, डेभल प्याट्रीक, टम स्टेयर, म्यारिन विलियम्सन र एन्ड्रयु यांग पनि चुनावी मैदानमै छन् ।
को प्रगतिशिल को मध्यपन्थी ?
डेमोक्रेटिक उम्मेदवारहरुमा एलिजाबेथ वारेन, बर्नी स्याण्डर्स, एन्ड्रयु यांग, कोरी बुकर र तुल्सी गब्बार्ड प्रगतिशिल उम्मेदवारहरु मानिन्छन् । तर माइलक ब्लुमबर्ग, जो बाइडेन, एमी क्लोबुचार, हुलियन क्यास्ट्रो, जोन डेलानी, स्टीभ बुलोक, माइकल बेनेट मध्यपन्थी उम्मेदवारहरु हुन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा ट्रम्पसँग भिड्नका लागि भने यी उम्मेदवारहरुले डेमोक्रेटिक प्राइमरीको सामना गर्नुपर्नेछ । राज्यका प्राइमरीहरु र ककसहरुमा मतदाताहरुले सम्भावित उम्मेदवारहरुलाई मतदानमार्फत चुन्छन् । बन्द प्राइमरी वा ककसमा रजिस्टर्ड मतदाताहरुलेमात्र भोट हाल्न पाउँछन् ।
चुनिने विधि कस्तो ?
हरेक प्राइमरी र ककसमा डेलिगेट्सहरुको निश्चित नम्बर हुन्छ । उनीहरुले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आफ्नो राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छन् । प्राइमरी वा ककसबाट जुन उम्मेदवारले आफ्नो पक्षका धेरै डेलिगेट्सहरु प्राप्त गर्छ, त्यही उम्मेदवारले राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत प्राइमरी जितेर राष्ट्रपतिको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँछ । पार्टीका आफ्ना स्वतन्त्र डेलिगेट्स र सुपरडेलिगेट्स पनि हुन्छन् । स्वतन्त्र वा सुपरडेलिगेटहरु कुनै निश्चित उम्मेदवारलाई मतदान गर्न बाध्य हुँदैनन् ।
डेमोक्रेटिक पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी जुलाई १३ देखि १६ सम्म हुनेछ । यो महाधिवेशनबाटै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रतिका लागि पार्टीका तर्फबाट अन्तिम उम्मेदवारको टुंगो लगाइनेछ । ककस र प्राइमरीबाट छानिएका डेलिगेटसहरुले जुन उम्मेदवारका लागि छानिएका हुन्, त्यही उम्मेदवारलाई मत हाल्नुपर्छ भने स्वतन्त्र र सुपरडेलिगेटले आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मत हाल्न पाउँछन् ।
पहिलो राउण्डमा मतदान हुँदा उम्मेदवारका प्रतिबद्ध डेलिगेटहरुलेमात्र भोट हाल्न पाउँछन्, यति उनीहरुले भोट हाल्दा कसैको पनि बहुमत नआएमा स्वतन्त्र डेलिगेटहरुले भोट हाल्न पाउँछन् । पहिलो राउण्डमा कसैको पनि बहुमत नआएमा दोश्रो राउण्डमा प्रतिबद्ध डेलिगेटहरुले पनि जुनसुकै उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउँछन् भने स्वतन्त्र वा सुपर डेलिगेटले पनि भोट हाल्न पाउँछन् ।
सन् २०२० को डेमोक्रेटिक पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि झण्डै ४५९४ जना डेलिगेटहरु हुने अपेक्षा गरिएको छ जसमा कुनै उम्मेदवारप्रति प्रतिबद्ध ३८३६ र स्वतन्त्र सुपर डेलिगेटहरु ७५८ जना हुनेछन् । पहिलो राउण्डको चुनावबाट डेमोक्रेटिक पाईमरीमा छानिनका लागि राष्ट्रपति उम्मेदवारले कम्तीमा १९१९ मत ल्याउनुपर्नेछ । यदि पहिलो राउण्डमा उक्त मत ल्याउन नसकेको खण्डमा सुपरडेलिगेटहरुले समेत दोश्रो राउण्डमा त हाल्नेछन् र प्राइमरी जित्नका लागि २२९८ मत ल्याउनुपर्नेछ ।
विभिन्न राज्यबाट महाअधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने डेलिगेट्सहरुको संख्या तय गरिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि न्युयोर्कबाट ३२७ डेमोक्रेटिक डेलिगेट्सले भाग लिनेछन् भने क्यालिफोर्नियाबाट सबैभन्दा धेरै ४९५ जना डेमोक्रेटिक डेलिगेट्सहरुले महाधिवेशनमा भाग लिनेछन् ।
महाधिवेशनबाट चुनिएका राष्ट्रपतिका एकजना डेमोक्रेटिक उम्मेदवारले रिपब्लिकन उम्मेदवारसँग अन्तिम चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । सन् २०१६ को डेमोक्रेटिक नेशनल कन्भेन्सनमा हिलारी क्लिन्टनले २८४२ र बर्नी स्याडर्सले १८६५ मत ल्याएका थिए । र हिलारी क्लिन्टन नै ट्रम्मसँग चुनाव लड्नका लागि छानिएकी थिइन् ।
यसरी हुन्छ अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनाव